Mitemo nemigariro - Element Society
Kushandisa webhusaiti yedu
Ndapota verenga aya mazwi nemitemo zvakanyatsonaka sezvavanotonga kushandisa kwako kwewebsite iyi. Kushandisa kwako kwepaiti ino kunogamuchirwa kweMitemo nemigariro, iyo inotanga kushanda kubva pazuva rawakatanga kushanyira panzvimbo. Kana Mitemo neMagariro aya asina kugamuchirwa zvizere, tapota shandisa kushandiswa kwechirongwa ichi pakarepo. Unobvumirana kushandisa sendimi chete nekuda kwepamutemo, uye nenzira isingapindikodzero kodzero dzevamwe vanhu, kana kuvhiringidza kana kudzivisa kushandiswa kwavo uye kufara kwepaiti ino.
Iyi webhusaiti uye ruzivo rwayo runopiwa pamusoro pe 'sezvazviri' musimboti pasina zvivimbiso zvemhando chero ipi zvayo, zvingareva kana kutaura. Kushandisa iyi webhusaiti uye ruzivo rwaro rwuri zvachose pamusana pengozi yemushandi. Pasinei nenyaya iyo Element Society inofanira kutongerwa chero ipi zvayo inokuvadza chero ipi zvayo inobuda kana yakabatana newebsite ino. Mushonga wako wega uye wega wekusagutsikana newebsite ino uye / kana ruzivo rwakanyorwa is kurega kushandisa shandisi uye ruzivo.
Element Society haibvumirisi kuti mabasa ari munzvimbo ino haazovhiringidziki kana kukanganisa kusina, kana kuti kukanganisa kuchagadziriswa.
Utachiona hwekudzivirirwa, kuvharidzira uye zvimwe zvikanganiso
Tinoedza zvose kuongorora uye kuongorora zvinhu pamatanho ose ekugadzirwa, zvisinei iwe unofanirwa kutora matanho ako kuti uone kuti nzira yaunoshandisa pakuwana iyi webhusaiti haisi kukuisa pangozi yehutachiona, kakombiyuta kakombiyuta kana zvimwe zvinopindira zvinogona kukuvadza kombiyuta yako.
Hatigoni kubvuma chero mutoro wekurasikirwa kupi zvako, kuvhiringidzika kana kukuvadza kune deta yako kana kombiyuta yako iyo inogona kuitika apo uchishandisa mashoko akawanikwa kubva pane ino webhusaiti.Hamufaniri kushandisa zvisizvo nzvimbo yedu nekuziva muchivhura mavairasi, trojans, minye, mabhigiki emagetsi kana zvimwe zvinhu zvakashata kana teknolojia zvinokuvadza. Iwe haufaniri kuedza kuwana ruzivo rwusina mvumo yepaiti yedu, iyo server iyo nzvimbo yedu yakachengetwa kana chero seva, kombiyuta kana dhesi yepamusoro yakabatana newebsite yedu. Iwe haufaniri kukwikwidza nzvimbo yedu kuburikidza nekuramba-kwe-kushungurudzwa kwebasa kana kuparadzaniswa kwekuramba-kwe-kushungurudzwa kwebasa.
Nokuputsa urongwa uhwu, iwe waizoita mhosva kune pasi peKomputa Misuse Act 1990. Tichazopa chero kukanganisa kwakadaro kune avo vane kodzero dzekutonga mitemo uye isu tichashanda pamwe chete nevane masimba kuburikidza nekuzarura unhu hwako kwavari.
Mashoko pamusoro pako
Hatizombopfuuri zvese zvaunotipa kune kune ani zvake kunze kweavo zvataurwa mumutemo wega wega.
Kunyange zvazvo kuedza kwose kwakagadziriswa kwakaitwa kuitira kuve nechokwadi kwezvakagadzirwa, hapana mutoro unogona kutorwa nokuda kwekanganiso chero ipi kana kukanganisa.
Nepo isu tichiedza zvose kuchengetedza webhusaiti yeElement Society kusvika panguva ino, hatisi kupa chero hupi zvingavimbisa, mamiriro kana zvivimbiso maererano nekururama kwemashoko ari pawebsite. Isu hatigamuchiri mhosva yekurasikirwa kana kukanganisa kunoshandiswa nevashandisi vewebsite, zvisinei, zvakananga, zvisingaoneki kana zvakakosha, zvingave zvichikonzerwa nekukanganisa, kukanganisa kontrakiti kana zvimwe.
Izvi zvinosanganisira kurasikirwa kwe: mari kana mari, bhizinesi, zvikwereti kana zvibvumirano, kuchengetedzwa kwakatarwa, deta, kufarira, pfuma chaiyo kana kuparara kwemahofisi kana nguva yehofisi maererano nesangano redu kana mukubatanidzwa nekushandiswa, kusakwanisa kushandisa, kana kuwanikwa kwe kushandiswa kwesaiti yedu, chero mawebsite akabatanidzwa naro uye chero zvinhu zvakatumirwa pairi. Iyi mamiriro haafaniri kudzivirira zvirevo zvekurasikirwa kana kukanganisa pfuma yako chaiyo kana zvimwe zvipi zvinotaurira kukanganiswa kwemari zvakananga izvo zvisingabatanidzwi nezvimwe zvezvikamu zvakataurwa pamusoro apa.
Izvi hazvibatsiri mutoro wedu wekufa kana kukanganisa kwedu kunobva pakusateerera kwedu, kana mutoro wedu wekunyengera kusakanganiswa kana kusavhiringidzika sechinhu chinokosha, kana chimwe chikwereti chisingagoni kubviswa kana kupera mumutemo unoshanda.
Tinogamuchira uye kukurudzira mamwe mawebhusayithi kuti atanise nemashoko akachengetwa pamapeji aya, uye haufaniri kukumbira mvumo yekubatanidza ku elementsociety.co.uk
Zvisinei, hatikupi mvumo yekuratidza kuti webhusaiti yako yakabatanidzwa, kana inogamuchirwa neElement Society.
Element Society haibvumi chero mhosva pamusoro zvinyorwa zvezvikamu zvitatu zvemasangano. Kuvapo kwezvibatanidza izvi hazvirevi kubvumirwa kwemawebsite, kana maonero akaratidzwa mazviri. Kushamwaridzana kwako kune zvivako izvi iwe pachako uri pangozi yako pachako.
Kuongorora kune aya mazwi
Element Society inogona kuvandudza Magwaro neMitemo panguva ipi zvayo, uye iwe unobvumirana kuti uongorore nguva nenguva. Iko kushandurwa hakufaniri kugamuchirwa kwauri, unobvumirana kurega kupinda paiti ino pakarepo.
Copyright, trademark uye kodzero yemafungiro edzimba
Hapana rutivi rwewebsite ino, kusanganisira ruzivo, mifananidzo, ma logos, mapikicha, uye kuonekwa kwechimbo chesaiti, inogona kunyorwa, yakabudiswazve, inoparidzirwa kana kubudiswa chero ipi zvayo kunze kwemvumo yakanyorwa yakanyorwa nevatori vekodzero kunze kwekuda kwako, kana kwete kushandiswa kwemabhizimisi.
Aya Mitsara nemitemo ichadzorwa nemitemo yeEngland neWales. Dare rekuEngland neWales richava nehutongi maererano nenharo ipi zvayo inogona kubuda.
Kana imwe yemitemo nemitemo ichagadziriswa kuva mvumo yemutemo, isina kukodzera kana kusingabatsiriki nekuda kwehurumende chero ipi zvayo kana nyika iyo iyo Mitemo inenge yakarongwa kuti ibudirire, zvino kusvika pamwero uye mukati maro iyo nguva isiri pamutemo, isina kubvumirwa kana kusingabatsiriki , ichaparadzaniswa uye kubviswa kubva pamitemo iyi uye mitemo yakasara ichapona, inoramba yakasimba uye yakasimba uye inoramba ichisunga uye inosungirwa.